Ny sekreteram-panjakana amerikanina teo aloha Colin Powell dia nodimandry tamin'ny COVID-19 tamin'ny faha-84 taonany
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Ny sekreteram-panjakana amerikanina teo aloha Colin Powell dia nodimandry tamin'ny COVID-19 tamin'ny faha-84 taonany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny sekreteram-panjakana amerikanina teo aloha Colin Powell dia nodimandry tamin'ny COVID-19 tamin'ny faha-84 taonany.
Nanjary diso fanantenana i Powell noho ny firosoan'ny ankolafy ankavanana ary nanohana an'i Barack Obama ampahibemaso mihitsy aza tamin'ny filatsahany ho filoham-pirenena. I Powell dia nanohana ihany koa ny filatsahan'i Joe Biden hitarika ny firenena, ary nilaza fa "filoha ho reharehantsika rehetra isika."
Ny jeneraly kintana efatra efa misotro ronono ary ny sekreteram-panjakana amerikanina teo aloha, Colin Powell, dia maty noho ny fahasarotan'ny COVID-19.
Colin Powell dia efa nahazo fitsaboana tao amin'ny Walter Reed National Medical Center.
Colin Powell dia voamarina fa voan'ny myeloma maro.
Colin Powell, Repoblikana malaza, izay lehilahy amerikanina afrikana voalohany nanompo Sekreteram-panjakana amerikana, dia maty tamin'ny faha-84 taonany, noho ny fahasarotana vokatry ny COVID-19.
Ny veteranita iray 35 taona an'ny tafika amerikana, izay nisondrotra ho jeneraly kintana efatra alohan'ny nidirany tao amin'ny politika, dia efa nahazo fitsaboana tao amin'ny Walter Reed National Medical Center, rehefa nodimandry izy, nanambara ny fianakaviany androany tamin'ny lahatsoratra iray ny pejiny Facebook.
"Namoy vady, raim-pianakaviana, raibe sy amerikana lehibe iray nahafinaritra sy be fitiavana izahay," hoy izy ireo ary nanampy fa nanao vaksiny feno tamin'ny COVID-19 izy, saingy nahafaty ny tenany ihany tamin'ny farany.
Nisaotra ny mpitsabo ny fianakavian'i Powell “noho ny fitsaboana azy ireo”. Ny antony nahafaty dia nambara ho "fahasarotana avy amin'ny COVID-19." Ny alatsinainy maraina lasa teo izy no nandalo.
Jeneraly kintana efatra efa misotro ronono no voamarina fa mararin'ny myeloma marobe, hoy ny fampitam-baovao, karazana homamiadan'ny ra izay manakana ny fahafahan'ny vatana hiady amin'ny aretina.
Colin Powell dia talen'ny Chief of Staff Joint, ny toerana miaramila ambony indrindra ao amin'ny Departemantan'ny Fiarovana amerikana, notarihin'ny filoha George HW Bush, ary izy no tanora indrindra ary Afrikanina amerikana voalohany nitana izany toerana izany.
I Powell aza nantsoina ho filoham-pirenena mainty amerikana voalohany, taorian'ny nahazoany laza taorian'ny fampielezan-kevitra notarihin'i Etazonia hanohitra an'i Saddam Hussein tany Koety tamin'ny taona 1990.
Taty aoriana dia i George W. Bush no voalohany Sekreteram-panjakana ary, nandritra izany fotoana izany, dia lasa tompon'andraikitra ambony mainty ambony. Tamin'ny 2003, nanao ny raharahan'ny fitantanan-draharaham-panjakana i Powell noho ny nanafihany an'i Irak tany amin'ny Firenena Mikambana, tamin'ny fitanisana fa diso ny fahitana fa ny fanjakan'i Hussein Ba'athist dia nitahiry fitaovam-piadiana fanimbana betsaka.
Tamin'ny sary malaza ankehitriny dia nitazona tavoahangy modely misy ny hosotra anthrax manoloana ny UN General Assembly izy, fa kosa hanaiky ny hetsika ho "blot" amin'ny rakitsorany. Ny ady dia fahavoazana naharitra valo taona.
Tombanana ho Irak tapitrisa mahery no namoy ny ainy tamin'ilay herisetra na noho ny tsy fahampiana nateraky ny fanafihana, ary miaramila amerikana an'arivony maro no maty nandritra ny dian'ny Etazonia tany Irak. Ny vokatry ny fananiham-bohitra dia nanjary herisetra teo amin'ny antokom-pinoana sy fiakaran'ny fanjakana Silamo (IS, ISIS teo aloha).
Nanjary diso fanantenana i Powell noho ny firosoan'ny antokony ho amin'ny ankavanana ary notohanan'ny besinimaro aza izy Barack Obama tamin'ny filàny ho filoham-pirenena.
I Powell dia nanohana ihany koa ny filatsahan'i Joe Biden hitarika ny firenena, ary nilaza fa "filoha ho reharehantsika rehetra isika."
Nanan-janaka telo i Powell ary i Almà vadiny sisa velona, ​​izay nanambady tamin'ny 1962.